जेरेमीको कथा, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
जेरेमी एक विकृत शरीर, एक सुस्त दिमाग, र एक पुरानो, असाध्य रोगको साथ जन्म भएको थियो जसले बिस्तारै उसको सम्पूर्ण युवा जीवन मारेको थियो। यद्यपि, उनका बुबाआमाले सकेसम्म उनलाई सामान्य जीवन दिने कोशिश गरे र उसलाई निजी स्कूलमा पठाए।
१२ बर्षको उमेरमा, जेरेमी दोस्रो कक्षामा मात्र थिए। उनका शिक्षक डोरिस मिलर उहाँसँग प्रायजसो हताश हुनुहुन्थ्यो। ऊ आफ्नो कुर्सीमा पछाडि सरकन्थ्यो, झुकिरहेको र डरलाग्दो आवाज। कहिलेकाहिँ उहाँ फेरि स्पष्टसँग बोल्नुहुन्छ, मानौं कुनै उज्यालो ज्योतिले उसको दिमागको अन्धकारमा प्रवेश गरेको छ। धेरै जसो समय, जेरेमीले आफ्ना शिक्षकलाई दु: खी बनाए। एक दिन उनले आफ्ना बाबुआमालाई बोलाए र उनीहरूलाई स्कूलमा परामर्श सत्रको लागि आउन आग्रह गरे।
जब फोरेस्टर्स खाली स्कूलको वर्गमा चुपचाप बसिरहेका थिए, डोरिसले तिनीहरूलाई भने: «जेरेमी वास्तवमै एउटा विशेष स्कूलको हो। अरू बच्चाहरूको साथ रहनु उसको लागि उचित हुँदैन, जसलाई कुनै शिक्षा समस्या छैन।
श्रीमती फोरेस्टर चुपचाप रुँदै आफैलाई कराईन् जब उनका श्रीमान्ले "सुश्री मिलर," उनले भने, "जेरेमीलाई स्कूलबाट निकाल्ने हो भने यो धिक्कारलाग्दो हुनेछ। हामीलाई थाहा छ कि उनी यहाँ हुन मन पराउँछन्। »
डोरिस त्यहाँ बसिरहेकी धेरै पछि आमाबाबुले छोड्नुभयो र हिउँमा झ्याल बाहिर घिसार्दै। जेरेमीलाई उसको कक्षामा राख्नु उचित थिएन। उनले १ children जना बच्चाहरूलाई सिकाउनुपर्थ्यो र जेरेमी एउटा विकार थियो। अचानक उनीहरूले आफूलाई दोषी महसुस गरे। "हे भगवान," उनले जोरले चिच्याए, "म यहाँ विलाप गर्दैछु, यद्यपि मेरो समस्याहरू यस गरीब परिवारको तुलनामा केही पनि छैन! कृपया मलाई जेरेमीको साथ अधिक धैर्यवान बनाउन मद्दत गर्नुहोस्! »
वसन्त आयो र बच्चाहरूले आउँदो इस्टरको बारेमा उत्साहित कुरा गरे। डोरिसले येशूको कथा सुनाई र त्यसपछि नयाँ जीवन पलाउँदैछ भन्ने धारणामा जोड दिन उसले प्रत्येक बच्चालाई ठूलो प्लास्टिकको अण्डा दिए। "ठीक छ," उनले उनीहरूलाई भनिन्, "म चाहन्छु कि तपाईले यो घर लैजानुहुन्छ र भोलि फिर्ता ल्याउनु हुन्छ कि केहि नयाँ जीवन देखाउँदछ। के तपाईंले बुझ्नुभयो? "
"हो, श्रीमती मिलर!" बच्चाहरूले उत्साहपूर्वक जवाफ दिए - सबै जेरेमी बाहेक। उसले ध्यान दिएर सुने, उनको अनुहार सधैं उनको अनुहारमा। उनी छक्क पर्छिन् कि यदि उनीले यो काम बुझेका छन् भने। हुनसक्छ उनले आफ्ना बाबुआमालाई बोलाउन र तिनीहरूलाई परियोजना बताउन सक्छिन्।
भोलिपल्ट बिहान, १ children केटाकेटीहरू स्कूल आए, हाँसेर कुराकानी गर्दै, श्रीमती मिलरको टेबुलमा ठूलो विकरको टोकरीमा अण्डा राखेर। जब उनीहरूले आफ्नो गणित पाठ समाप्त गरे, यो अण्डाहरू खोल्ने समय भयो।
डोरिसले पहिलो अण्डामा एउटा फूल भेट्टाए। "ओ हो, फूल निश्चित रूपमा नयाँ जीवनको प्रतीक हो," उनले भनिन्। "जब जमिनबाट बोटबिरुवा उम्रन्छ, हामी जान्दछौ वसन्त यहाँ छ।" अगाडिको प row्क्तिमा एक सानी केटीले आफ्ना हातहरू उठाइन्। "यो मेरो अण्डा हो, श्रीमती मिलर," उनले उद्गार गरिन्।
अर्को अण्डामा प्लास्टिकको तितली रहेको छ जुन एकदम वास्तविक देखिन्थ्यो। डोरिसले यसलाई समात्यो: "हामी सबैलाई थाहा छ कि क्याटरपिलर परिवर्तन हुन्छ र सुन्दर पुतलीमा बढ्छ। हो, यो नयाँ जीवन पनि हो » सानो जुडी गर्वसाथ मुस्कुराउँदै भन्यो, "सुश्री मिलर, यो मेरो अण्ड हो।"
नेक्स्ट डोरिसले यसमा कासमा ढु a्गा भेट्टाए। उनले बताए कि काईले पनि जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्छिन्। बिली पछाडिको प from्क्तिबाट जवाफ दिए। "बुबाले मलाई मदत गर्नुभयो। त्यसपछि डोरिसले चौथो अन्डा खोले। यो खाली थियो! यो जेरेमी हुनु पर्छ, उनले सोचे। उसले निर्देशनहरू बुझ्नु पर्दैन। यदि केवल ऊ आफ्नो आमा बुबालाई कल गर्न बिर्सिदिन। उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने चाहाना थिएन, उनी चुपचाप अण्डा पन्छाएर अर्कोको लागि पुगिन्।
अचानक जेरेमी बोले। "सुश्री मिलर, तपाईं मेरो अण्डाको बारेमा कुरा गर्न चाहनुहुन्न?"
डोरिसले उत्साहले जवाफ दिए: "तर जेरेमी - तपाईको अण्डा खाली छ!" उनले उसको आँखामा हेरे र हल्का हुँदै भने: "तर येशूको चिहान पनि खाली थियो!"
समय स्थिर छ। जब उनले फेरि आफूलाई समातिन्, डोरिसले उहाँलाई सोधिन्: "चिहान किन खाली थियो तिमीलाई थाहा छ?"
"ओ हो! येशूलाई मारियो र त्यहाँ राखियो। त्यसपछि उसको बाबुले उनलाई हुर्काए! » घण्टी बज्यो जब केटाकेटीहरू स्कूलको आँगनमा दगुरे, डोरिस रोए। जेरेमीको तीन महिना पछि मृत्यु भयो। जसले उनको अन्तिम चिहानमा उनको सम्मान गरे उनको शवगृहमा १ eggs अन्डा देखेर तिनीहरू छक्क परे।
शुभ समाचार एकदम सजिलो छ - येशू बौरिउठ्नुभयो! उहाँको प्रेमले तपाईंलाई आध्यात्मिक उत्सवको समयमा आनन्दले भरोस्।